Matiu 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ozi Ọma Matiu Dere 13:1-58
IHE ATỤ NDỊ GBASARA ALAEZE (1-52)
Ọgha mkpụrụ (1-9)
Ihe mere Jizọs ji eme ihe atụ (10-17)
A kọwara ihe atụ ọgha mkpụrụ (18-23)
Ọka wit na ata (24-30)
Mkpụrụ osisi mọstad na ihe iko achịcha (31-33)
Otú Jizọs si eji ihe atụ akụzi ihe mezuru amụma (34, 35)
A kọwara ihe atụ ọka wit na ata (36-43)
Akụ̀ e zoro n’ala na nkume pel mara mma (44-46)
Akụ̀ ndị dị ọhụrụ na ndị mere ochie (51, 52)
Ndị obodo Jizọs anabataghị ya (53-58)
13 Mgbe Jizọs si n’ụlọ pụọ n’ụbọchị ahụ, ọ gara n’akụkụ oké osimiri nọdụ ala. 2 Ìgwè mmadụ gbakọkwara n’ebe ọ nọ, nke mere na ọ banyere n’ụgbọ mmiri ma nọdụ ala, ìgwè mmadụ ahụ niile guzokwa n’akụkụ osimiri ahụ.+ 3 O wee meere ha ọtụtụ ihe atụ.+ Ọ sịrị: “Ọgha mkpụrụ gawara ịgha mkpụrụ.+ 4 Ka ọ nọ na-agha mkpụrụ, mkpụrụ ụfọdụ dara n’akụkụ ụzọ, ụmụ nnụnụ abịa tụrụchaa ha.+ 5 Mkpụrụ ụfọdụ dara n’ala nkume ma pulite ozugbo n’ihi na ájá dị ebe ahụ emighị emi.+ 6 Ma mgbe anwụ chawara, ha chanwụrụ, kpọnwụọkwa n’ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ. 7 Mkpụrụ ụfọdụ dara n’ebe ogwu juru. Ogwu ndị ahụ tolitere ma kpagbuo ha.+ 8 Ma ndị ọzọ dara n’ala dị mma, wee malite ịmị mkpụrụ. Ụfọdụ mịrị okpukpu otu narị (100), ụfọdụ amịa okpukpu iri isii, ndị ọzọ amịa okpukpu iri atọ.+ 9 Onye nwere ntị, ya nụ.”+ 10 Ndị na-eso ụzọ ya bịara wee sị ya: “Gịnị mere i ji jiri ihe atụ na-agwa ha okwu?”+ 11 O wee sị ha: “Ọ bụ unu ka Chineke mere ka unu ghọta ihe nzuzo ndị dị nsọ+ nke Alaeze eluigwe, ma o meghị ka ha ghọta ya. 12 N’ihi na onye ọ bụla nke nwere ihe, a ga-enyekwu ya, meekwa ka o nwehie ya nne. Ma onye ọ bụla na-enweghị, a ga-anapụdị ya nke o nwere.+ 13 Ọ bụ ya mere m ji eji ihe atụ agwa ha okwu, n’ihi na ha na-ele anya, ma ha anaghị ahụ ihe ọ bụla. Ha na-ege ntị, ma ha anaghị anụ ihe, ha anaghịkwa aghọta ihe ọ bụla.+ 14 Amụma Aịzaya na-emezu n’isi ha. Ọ sịrị: ‘Unu ga-anụ ihe, ma unu agaghị aghọta ihe ọ bụla. Unu ga-ele anya, ma unu agaghị ahụ ihe ọ bụla.+ 15 N’ihi na obi ndị a anaghịzi anabata ihe, ha ejirikwala ntị ha nụ ihe ma ha emeghị ihe ọ bụla. Ha emechiekwala anya ha ka ha ghara ịhụ ihe ọ bụla, mechie ntị ha ka ha ghara ịnụ ihe ọ bụla, kpọchiekwa obi ha ka ha ghara ịghọta ihe ọ bụla, gharakwa ịgbanwe, mụ agwọọ ha.’+ 16 “Ma, unu na-enwe obi ụtọ n’ihi na unu na-ahụ ihe ndị a, na-anụkwa ha.+ 17 N’ihi na n’eziokwu, ana m asị unu, ọtụtụ ndị amụma na ndị ezi omume chọrọ ịhụ ihe ndị unu na-ahụ, ma ha ahụghị ha,+ ha chọkwara ịnụ ihe ndị unu na-anụ, ma ha anụghị ha. 18 “Gezienụ ntị n’ihe ihe atụ gbasara nwoke ahụ ghara mkpụrụ pụtara.+ 19 Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ okwu banyere Alaeze Chineke ma ọ ghọtaghị ihe ọ pụtara, ajọ onye ahụ+ na-abịa pụnara ya ihe a ghara n’obi ya. Ọ bụ ya bụ nke a ghara n’akụkụ ụzọ.+ 20 Ma nke ahụ a ghara n’ala nkume bụ onye nụrụ okwu ahụ ma jiri ọṅụ nabata ya ozugbo.+ 21 Ma, okwu ahụ agbanyeghị mgbọrọgwụ n’obi ya, kama ọ nọrọ obere oge, ozugbo nsogbu ma ọ bụ mkpagbu bịaara ya n’ihi okwu ahụ, ọ na-akwụsị ikwere okwu ahụ. 22 Ma nke ahụ a ghara n’ebe ogwu juru bụ onye na-anụ okwu ahụ, ma nchegbu nke oge a*+ na akụnụba nke na-aghọgbu ndị mmadụ na-akpagbu okwu ahụ, okwu ahụ aghara ịmị mkpụrụ.+ 23 Ma nke ahụ a ghara n’ala dị mma bụ onye na-anụ okwu ahụ ma na-aghọta ihe ọ pụtara, na-amịkwa mkpụrụ ma na-emepụta ihe. Ọ na-amị mkpụrụ okpukpu otu narị (100), mịa ụfọdụ okpukpu iri isii, mịakwa ndị ọzọ okpukpu iri atọ.”+ 24 O meere ha ihe atụ ọzọ, sị: “Alaeze eluigwe dị ka nwoke ghara ezigbo mkpụrụ n’ubi ya. 25 Mgbe ndị mmadụ nọ na-ehi ụra, onye iro ya bịara kụọ ata n’etiti ọka wit ahụ pụọ. 26 Mgbe o pulitere mịa mkpụrụ, ata ndị ahụ pulitekwara. 27 N’ihi ya, ndị ohu nwoke ahụ bịara sị ya, ‘Nna anyị ukwu, ọ́ bụghị ezigbo mkpụrụ ka ị ghara n’ubi gị? Oleezi otú ata si na-eto na ya?’ 28 O wee sị ha, ‘Ọ bụ onye iro mere ihe a.’+ Ndị ohu ya wee sị ya, ‘Ị̀ chọrọ ka anyị gaa fopụsịa ha?’ 29 O wee sị, ‘Mba, ka unu ghara ifopụkọta ata ndị ahụ na ọka wit ndị ahụ. 30 Hapụnụ ha abụọ ka ha tokọọ ruo n’oge owuwe ihe ubi. N’oge owuwe ihe ubi, m ga-agwa ndị na-ewe ihe ubi, sị: Burunụ ụzọ chịkọta ata ndị ahụ, kee ha n’ùkwù n’ùkwù ka e suo ha ọkụ. E mechaa, unu achịkọta ọka wit ndị ahụ chịba n’ụlọ m na-akwakọba ihe.’”+ 31 O meere ha ihe atụ ọzọ, sị: “Alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad, nke mmadụ weere kụọ n’ubi ya.+ 32 N’eziokwu, ọ bụ mkpụrụ kacha nta, ma mgbe o toro, ọ na-ebu ezigbo ibu ma ghọọ osisi, nke mere na nnụnụ na-abịa biri n’alaka ya.” 33 O meere ha ihe atụ ọzọ, sị: “Alaeze eluigwe dị ka ihe iko achịcha nke nwaanyị weere tinye ná ntụ ọka juru arịa atọ buru ibu, ruo mgbe ntụ ọka ahụ niile koro.”+ 34 Ihe atụ a niile ka Jizọs meere ìgwè mmadụ ahụ. N’eziokwu, ọ naghị agwa ha okwu n’emereghị ha ihe atụ,+ 35 ka ihe e si n’ọnụ onye amụma kwuo wee mezuo. Ọ sịrị: “M ga-emeghe ọnụ m jiri ihe atụ kụzie ihe. M ga-ekwusa ihe ndị zoro ezo kemgbe a tọrọ ntọala.”*+ 36 Mgbe ọ gwachara ìgwè mmadụ ahụ ka ha laa, ọ banyere n’ụlọ. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya wee sị: “Kọwaara anyị ihe atụ ahụ i ji ata dị n’ubi mee.” 37 Ọ gwara ha, sị: “Onye ghara ezigbo mkpụrụ ahụ bụ Nwa nke mmadụ. 38 Ubi ahụ bụ ụwa.+ Ezigbo mkpụrụ ahụ bụ ụmụ Alaeze, ma ata ahụ bụ ụmụ ajọ onye ahụ.+ 39 Onye iro nke kụrụ ha bụ Ekwensu. Owuwe ihe ubi ahụ bụ ọgwụgwụ oge a.* Ndị ahụ na-ewe ihe ubi bụ ndị mmụọ ozi. 40 N’ihi ya, otú ahụ a na-achịkọta ata suo ha ọkụ, otú ahụkwa ka ọ ga-adị n’ọgwụgwụ oge a.*+ 41 Nwa nke mmadụ ga-eziga ndị mmụọ ozi ya, ha ga-esikwa n’Alaeze ya chịkọta ndị niile na-eme ka ndị ọzọ mee mmehie nakwa ụmụ mmadụ ndị na-emebi iwu. 42 Ha ga-atụbakwa ha n’oké ọkụ.+ N’ebe ahụ ka ha ga-anọ na-ebe ákwá, na-atakwa ikikere ezé. 43 N’oge ahụ, ndị ezi omume ga-enwu gbaa dị ka anyanwụ+ n’Alaeze Nna ha. Onye nwere ntị, ya nụ. 44 “Alaeze eluigwe dị ka akụ̀ e zoro n’ala, nke otu nwoke hụrụ wee zoo ya. Ọ gara ree ihe ndị o nwere wee zụọ ala ahụ n’ihi na ọṅụ juru ya obi.+ 45 “Alaeze eluigwe dịkwa ka onye ahịa na-achọ nkume pel mara mma. 46 Mgbe ọ hụrụ otu nkume pel dị oké ọnụ, ọ lara ree ihe niile o nwere ozugbo wee zụọ ya.+ 47 “Alaeze eluigwe dịkwa ka ụgbụ a wụnyere n’oké osimiri nke na-ekpokọta ụdị azụ̀ niile. 48 Mgbe o juru, ha dọgotere ya n’ikpere osimiri, nọdụ ala, chịkọta ndị dị mma+ wụnye n’arịa dị iche iche, ma ha tụfuru ndị na-adịghị mma.+ 49 Otú ahụ ka ọ ga-adị n’ọgwụgwụ oge a.* Ndị mmụọ ozi ga-aga si n’ebe ndị ezi omume nọ kpọpụta ndị ajọ omume, 50 ha ga-atụbakwa ha n’oké ọkụ. N’ebe ahụ ka ha ga-anọ na-ebe ákwá, na-atakwa ikikere ezé. 51 “Ùnu ghọtara ihe ihe ndị a niile pụtara?” Ha asị ya: “Ee.” 52 Ọ sịziri ha: “Ọ bụrụ otú ahụ, onye ọ bụla nke na-akụzi ihe, bụ́ onye a kụziiri banyere Alaeze eluigwe, yiri nwoke bụ́ onyeisi ezinụlọ, onye na-esi n’ụlọ akụ̀ ya ewepụta ihe ndị dị ọhụrụ na ndị mere ochie.” 53 Mgbe Jizọs mechara ihe atụ ndị a, o si ebe ahụ gawa ebe ọzọ. 54 Mgbe ọ banyere n’obodo ya,+ ọ malitere izi ha ihe n’ụlọ nzukọ ha, nke mere na o juru ha anya, ha asị: “Olee ebe nwoke a si nweta amamihe a? Ònye nyekwara ya ike o ji arụ ọrụ ebube ndị a?+ 55 Onye a ọ́ bụghị nwa ọkwá nkà?+ Ọ́ bụghị nne ya ka a na-akpọ Meri? Ọ̀ bụkwa na ụmụnne ya ndị nwoke abụghị Jems na Josef na Saịmọn na Judas?+ 56 Ọ̀ bụ na anyị na ụmụnne ya ndị nwaanyị niile anọghị? Oleezi ebe o si nweta ihe ndị a niile?”+ 57 N’ihi ya, ha anabataghị ya.+ Ma Jizọs sịrị ha: “A na-asọpụrụ onye amụma ma e wezụga n’obodo ya nakwa n’ụlọ ya.”+ 58 Ọ rụghịkwa ọtụtụ ọrụ ebube ebe ahụ n’ihi na ha enweghị okwukwe.
^ O nwere ike ịbụ, “kemgbe a tọrọ ntọala ụwa.”